China bluuberi, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, red bayberry, kranberị nhazi igwe na mmepụta akara ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | JUMP
Bluuberi, blackberry, mulberry, strawberry, raspberị, red bayberry, kranberị nhazi igwe na mmepụta akara
Bluuberi, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, red bayberry, kranberị nhazi igwe na mmepụta akara nwere ike mepụta doro anya ihe ọ juiceụ juiceụ, turbid ihe ọ juiceụ juiceụ, ihe ọ juiceụ juiceụ uche, mkpụrụ ntụ ntụ, mkpụrụ osisi jam na ndị ọzọ na ngwaahịa.
Bluuberi, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, red bayberry, kranberị nhazi igwe na mmepụta akara nwere ike mepụta doro anya ihe ọ juiceụ juiceụ, turbid ihe ọ juiceụ juiceụ, ihe ọ juiceụ juiceụ uche, mkpụrụ ntụ ntụ, mkpụrụ osisi jam na ndị ọzọ na ngwaahịa. Mmepụta akara tumadi mejupụtara afụ ịsa igwe, mbuli. , igwe nyocha, ihe juicer akpa ikuku, tank enzymolysis, decanter, ultrafilter, homogenizer, igwe degassing, igwe sterilization, igwe juputara, igwe elekere na akụrụngwa akụrụngwa ndị ọzọ. Emere usoro mmepụta a na echiche dị elu na ogo dị elu nke akpaaka; Isi akụrụngwa bụ nke igwe anaghị agba nchara, nke na-emezu nhazi ịdị ọcha nke nhazi nri.
Bluuberi, blackberry, mulberry, strawberry, raspber, red bayberry, kranberị nhazi machine and production line package: karama karama, PET karama plastic, zip-top nwere ike, aseptic soft ngwugwu, brik katọn, gable top katọn, 2L-220L aseptic bag in ịgbà, ngwugwu katọn, akpa rọba, tin 70-7500g.
Bluuberi, blackberry, mulberry, strawberry, raspberị, red bayberry, kranberị nhazi igwe yana imepụta usoro ọrụ aka:
Họrọ ihe ndị dị ọhụrụ na ndị tozuru etozu ma jiri mmiri sachaa ugboro abụọ.
Mkpụrụ osisi mbụ: akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha uhie uhie ≤ 5%, mkpụrụ rere ure ≤ 5%, ntinye ≤ 3%;
Mkpụrụ osisi nke abụọ: mkpụrụ osisi na-acha uhie uhie ≤ 6%, mkpụrụ rere ure ≤ 8%, nsonye ≤ 5%.
Nkọwa anụ ahụ na nke kemịkal: ọdịnaya shuga ≥ 0.04g / ml, mkpokọta acid ≥ 25g / kg, acid na-agbanwe agbanwe ≤ 3 × 10-4g / ml.
Nhicha: tupu ịicingụ ihe ọ ,ụicingụ, a ga-ehichapụ ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ nke ọma ma kpochapụ akụkụ rere ure na nke ebu. N'ihi na a na-ejikarị akpụkpọ anụ eme ihe ndị na-emepụta ihe, ma ọ bụrụ na ehichaghị ya, a ga-ebute ájá na unyi n'ime ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ ma metụta àgwà ahụ. Kacha ọsọ ọsọ ọnụego nke nozulu bụ 20L / min-23l / min, na anya n'etiti nozulu na mkpụrụ osisi bụ 17cm-18cm.
Ọ dị mkpa ịkụpịa ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ tupu ịpịa iji mepụta usoro ndichapụ na ịpị iji melite mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi.
A na-amịpụta ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ site na nrụgide n'èzí. Dika ihe choro nke bioengineering enzymolysis na ihe omuma di egwu, akụrụngwa dakọtara na nhọrọ akụrụngwa nke mmịpụta mmiri na nkewa usoro ka emere; e wuru nchekwa nchekwa iji gbasaa oge juicing nke mkpụrụ beri beri beri site na ụbọchị iri atọ na oge nchịkọta (oge nchịkọta bụ July na August kwa afọ), yana ruo ụbọchị 45-60, nke mere ka ọnụego ngwa ngwa rụọ ọrụ nke ọma. na uru akụ na ụba nke usoro mmepụta ihe ọ juiceụ juiceụ a.
Ntụ jọgburu onwe
Wepu ahụ siri ike ma ọ bụ ụmụ irighiri ihe a kwụsịtụrụ na ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ. Ogo nke oghere nyo bụ ihe dịka 0.5mm.
Pectin nke dị na ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ ga-eme ka ihe ọ juiceụ juiceụ ghara ịma, na mgbakwunye, ọ nwere ike ichebe ihe ndị ọzọ ma gbochie nkọwa nke ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ. A na-eji pectinase eme mmiri pectin na mmiri ọ juiceụ fruitụ mkpụrụ osisi, nke mere na ihe ndị ọzọ dị na ihe ọ theụ juiceụ ahụ na-efunahụ nchedo pectin ma na-agbakọta ọnụ iji nweta nzube nke nkọwa. N'ozuzu, usoro onunu enzyme bụ 0.2% - 0.4% nke mkpụrụ osisi mkpụrụ osisi dị mma, na-achịkwa ọnọdụ okpomọkụ na 50 ℃ maka 3-4 h.
Nchedo agba, inactivation enzme na ụlọ ọgwụ
Ọhịa bluuberi mkpụrụ bụ ọgaranya antioxidant mmiri VC, VE na β - carotene. Na mgbakwunye, ọ nwekwara ọtụtụ anthocyanins nwere ike ịmị mmiri, nke nwere ezigbo ọgwụgwọ na-arịa ọtụtụ ọrịa ophthalmic. Ya mere, ọ dị mkpa iji nchekwa agba na teknụzụ inactivation enzyme iji bulie njigide nke ihe ndị na-arụ ọrụ na usoro nhazi. Sterilization bụ igbu microorganisms iji gbochie spoilage, nke ọzọ bụ inactivate enzyme ọrụ iji gbochie omume nke mgbanwe dị iche iche na-adịghị mma. Ejiri ọgwụ dị elu dị elu na-ekpo ọkụ ozugbo.
N'ụzọ dị otú a, enwere ike ime ka oge ịta ahụhụ dị mkpụmkpụ ma nwee ike ịdebe agba na ekpomeekpo ihe ọ theụ theụ ahụ. Mgbe ha gbusịrị, a na-echekwa ụfọdụ n’ime ha ma na-ere ya dị ka ihe ọ juiceụ juiceụ na-etinye uche, ụfọdụ na-ejikwa ihe ọ asụ nutụ na-edozi ahụ.
Nke gara aga: Mango, painiapulu, pọọpọ, igwe na-arụzi guava na ahịrị mmepụta
Osote: Olive, piom, bayberry, piich, aprịkọt, pịlị nhazi igwe na usoro mmepụta
Otube oroma, citrus, mkpụrụ osisi grepu, usoro lemon ...
Apple, ube, grape, pọmigranet nhazi mach ...